Akwụkwọ kacha mma Banyere India | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | Akwụkwọ, Novela, ọtụtụ
India bu obodo enigmatic, nke nwere ihe ohuru na agba, nke anyi nile choro ka anyi tufue ma obu, ma obu na anyi nwere ike ile anya site na kaleidoscope. Nhọrọ nke na-aghọ ihe ga-ekwe omume ma a bịa n'ịga njem site na ndị a akwụkwọ kacha mma gbasara India nke na-enyocha ihu dị iche iche nke otu n'ime mba kachasị iche n'ụwa.
1 Akwụkwọ kacha mma gbasara India
1.2 Swami na ndị enyi ya site n’aka RK Narayan
1.3 India: Mgbe Million Riots gasịrị, site na VS Naipaul
1.4 Ofmụ nke Midnight, nke Salman Rushdie dere
1.5 A zuru okè itule, site Rohinton Mistry
1.6 Chineke nke Obere Ihe, nke Arundhati Roy dere
1.7 Wagon Wagon, nke Anita Nair dere
1.8 Ezi Aha, nke Jhumpa Lahiri dere
1.9 White Tiger, nke Aravind Adiga dere
Ramayana bu India ihe Odyssey bu akwukwo ndi Western: akwukwo edemede nke otutu omenala dabere na uzo esi aghota akuko. E bipụtara oge na narị afọ nke atọ BC site n'aka onye na-ede uri Nhọrọ, Ramayana (ma ọ bụ Njem Rama) bụ Epic nke na-akọ akụkọ banyere Prince Rama na njem ya na agwaetiti Lanka iji chekwaa Sita ọ hụrụ n'anya site na njide nke Ravana. Zuru oke ngọpụ nweta nkuzi nke omenala Sanskrit nke ahụ ga-adịgide n'oge na nka ọ bụghị naanị nke India, kama nke mba ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia meriri na narị afọ nke asatọ.
Swami na ndị enyi ya site n’aka RK Narayan
Na India, ibu onye "swami" ọ pụtara ilekọta onwe ya, n'ozuzu dị ka yogi na-eru nso ịmụ nwa. Swami na ndị enyi ya, nke mbu nke akụkọ "Malgudi" nke Narayan, onye edemede akwukwo nke Graham Greene, abughi nani otu mbụ India na-arụ ọrụ bekee nke gafere ókèala, kamakwa na eserese nke afọ iri nke 30s na India nke otu nnwere onwe na-eru nso na ụbọchị ikpeazụ ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị ọkachamara na-anwa ịchọta ebe Malgudi dị, obodo akụkọ ifo ahụ na South India.
India: Mgbe Million Riots gasịrị, site na VS Naipaul
N'agbanyeghị ọnọdụ ya na Caribbean, agwaetiti nke Trinidad na Tobago ha mejuputara otu n’ime obodo ndi India kacha elu n’uwa. Ihe si na mba ahụ pụta na Naipaul, nke sitere na Hindu, maara nke ọma ruo oge mgbe ọ kpebiri ịlaghachi njem na India chọpụtaghachi njirimara gị. N’ime akwụkwọ nile nke akwụkwọ a, Naipaul na-akọwa obodo nna nna ya jiri ihunanya na ịdị nro, na echiche efu nke onye na-aga njem ebe dị iche karịa ka a hụburu. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime akwụkwọ kacha mma na India.
Ọ ga-amasị gị ịgụ India, nke VS Naipaul dere?
Ofmụ nke Midnight, nke Salman Rushdie dere
Weere otu nke kasị mma ihe atụ nke kpokọtara n'ezie "Mere na India", Ofmụ nke etiti abalị bụ ọrụ ahụ gbakọtara site na mgbe ahụ amaghi Salman Rushdie na-atụ aka na otu n'ime ihe omume kachasị dị ịrịba ama na akụkọ ntolite nke India: n’etiti abalị n’abalị iri na ise nke ọnwa Ọgọstụ, 15, n’oge ahụ mba Eshia nwere nnwere onwe. Ihe omume nke ọmụmụ ọmụmụ Saleem Sinai na-eme, onye na-agụ akụkọ na ikike karịrị ike onye tụgharịrị ọrụ a bipụtara na 1947 n'ime Onye mmeri nke Booker Prize ma ọ bụ James Tait Black Memorial Prize.
A zuru okè itule, site Rohinton Mistry
Amụrụ na Bombay n'ime ezinaụlọ Parsi, Mistry soro nwunye ya kwaga Canada na 1975 ebe ọ malitere ibipụta usoro akụkọ ga-ejikọ na mbipụta nke A nguzozi zuru oke na 1995. Akwụkwọ akụkọ siri ike ka ọ dị nro, edebere na obodo India n'oge ekwupụta ọnọdụ mberede, ihe kpatara nke a mkpụrụ edemede anọ amaghi soro ibe gi biri n’obere ulo. Akwụkwọ ọgụgụ bụ ahọpụtara maka akara akwụkwọ, meriri onyinye onyinye Trillium ma tinye ya na Club Book of Oprah n’afọ 2001, nke mere ka e ree ọtụtụ narị n’ime ya.
Chineke nke Obere Ihe, nke Arundhati Roy dere
Amụrụ n'ime ezinụlọ Syria-Christian bi na mpaghara ebe okpomọkụ Kerala, steeti South IndiaArundhati Roy were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ndụ ya iji dee akwụkwọ akụkọ a nke nkọwa ya na-eme ka ọ bụrụ ọrụ pụrụ iche, ọrụ pụrụ iche. Akụkọ ahụ, edebere na 1992 na 1963, na-agwa nwata na nzukọ na-esote nke Rahel na Estha, ụmụ ejima abụọ jikọrọ ihe nzuzo jọgburu onwe ya. Mgbe e bipụtara ya na 1997, Chi nke obere ihe ghọrọ onye kacha ere ihe na onye mmeri nke akwukwo Booker.
Wagon Wagon, nke Anita Nair dere
Ọnọdụ ụmụ nwanyị na India Ọ gbanweela ọtụtụ mgbanwe, mana ọ nwere ihe fọdụrụ dị ilu. Ebumnuche nke Nair na-ekwu okwu na peeji a niile nke onye edemede ya, Akhila, bụ nwanyị na-alụbeghị di na-ekpebi ịmalite njem ụgbọ oloko ebe ọ zutere ndị njem ise ndị ọzọ bụ mmụọ nsọ. Mụ nwanyị ndị nwere irascible, na-edo onwe ha n'okpuru ma na-alụ ọgụ nke na-eme microcosm jupụtara na ịhụnanya na ntụgharị uche.
Echefula Wagon Wagon, nke Anita Nair dere.
Ezi Aha, nke Jhumpa Lahiri dere
Onye na-ede akụkọ mkpirikpi tupu edere akwụkwọ akụkọ site na ịga nke ọma na ogo ọrụ dịka Ala ọhụrụ, Onye edemede-Bengali-American bụ Jhumpa Lahiri juru ụwa anya site na mbipụta 2003 nke akwụkwọ mbụ ya, Ezi aha. Akụkọ dị mgbagwoju anya nke na-agbaso nzọụkwụ nke alụm di na nwunye nke India nke ga-eme ka ịga biri na Cambridge. Mgbe ọ mụsịrị nwa mbụ ya, nhọrọ nke aha ahụ ghọrọ ihe atụ zuru oke n'etiti ọdịnala (nne nne ga-ahọrọ ya) na oge ọhụụ ha ga-emegharị. Emegharịrị akwụkwọ akụkọ a na 2006 na sinima.
White Tiger, nke Aravind Adiga dere
Site n'ịnyịnya n'etiti picaresque akwụkwọ na epistolary,White Agu A na-akọ ya site na ozi ịntanetị dị iche iche nke nwoke na-ezigara Prime Minister nke China. A na-akpọ nwoke a Balram Halwai, ọ bụkwa nwa nwoke e si n’otu n’ime obodo ndị kasị daa ogbenye n’India kpọta ka ọ rụọ ọrụ dị ka ohu na-egbu ndị ezinụlọ ọgaranya New Delhi. Site n'ebe ahụ, onye protagonist anyị na-achịkwa iji ghọọ onye ọchụnta ego ọbara na-egbu ọbara si n'obodo Bangalore. Akwukwo ahu, nke Adiga dere onye ode akwukwo nke abuo nke ritere Booker Prize, ghọrọ onye kacha ere ahịa na mbipụta ya na 2008.
Kedu akwụkwọ kachasị mma na India ị gụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akwụkwọ kacha mma gbasara India
Udo Nwoke dijo
Akwụkwọ akụkọ na-adọrọ adọrọ banyere India bụ ASHE NA ỌR GOD ỌR GOD GODAVARI (Amazon) O nwere njem, ọdịdị ala ndị mara mma, aghụghọ, ihe omimi, njem, na mmekọrịta ịhụnanya, edekwara ya nke ọma n'isiokwu ndị dị ka sati, alụmdi na nwunye a haziri ahazi, na ịkpa oke nke ndị inyom di ha nwụrụ.
Zaghachi Violeta Anderson
A na-akpọkwa akwụkwọ akụkọ ọzọ magburu onwe ya nke kọwara omenala ndị Hindu n'ụzọ doro anya ma maa mma na Las Torres del Silencio, (Amazon)
Zaghachi Rosalyn Perez
Rose Perez dijo
Owlọ elu nke ịgbachi nkịtị bụ akwụkwọ ọzọ na-atọ ụtọ ma edekọ banyere India na ọdịnala ya ndị ọzọ, dị na Amazon.
Zaghachi Rosa Perez
N’ezie ntụ dị na Osimiri Godavari na Tlọ Elu nke Nkịtị bụ nnukwu akwụkwọ ọgụgụ edebere na India, site n’aka otu onye edemede (Lourdes María Monert) mana enwere ike ịgụ ha iche iche n’ihi na ha abụghị saga mana nọọrọ onwe ha.
Isabel Garcia Moreno dijo
M ka gụchara akwụkwọ ọgụgụ akpọrọ Adventure in India na ahụrụ m na ọ bụ onye ode akwụkwọ aha ya bụ Carmen Pérez Calera na ọ na-eji akara ngosi "siestecita." Enwere m mmasị na ya nke ukwuu, ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu ma achọpụtara m na ọ bụ akwụkwọ ọchị ọchị dị egwu. Ọ bụ ugbu a n'efu na Amazon.
Zaghachi Isabel García Moreno
Zaghachi ka qxsfparewn
Ekwenyere m na ịpụ na ndepụta ahụ bụ otu n'ime akwụkwọ kachasị mma na nnukwu akwụkwọ e detụrụla banyere India, "A Good Match" nke Vikram Seth dere, nke ndị nkatọ pụrụ iche weere dị ka ihe kachasị mma nke ezi India.